laacib » 10 Xiddig Oo Saxiixooda Uu Kor U Dhaafi Doono 100 Milyan Xagaagan
10 Xiddig Oo Saxiixooda Uu Kor U Dhaafi Doono 100 Milyan Xagaagan
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa la filayaa in saxiixyo waa weyn ay ka dhacaan xagaagan madaama kooxaha Real Madrid, Manchester United iyo Bayern Munich ay dhamaantood doonayaan inay dib isku soo dhisaan.
Dhowr saxiix ayaa la filayaa inay kor u dhaafaan 100 milyan, waana lacag mar aheyd rikoor markii Real Madrid ay ka soo bixisay Gareth Bale laakiin waxaa kor u dhaafay Neymar, Mbappe iyo Philippe Coutinho.
Hadaba waxaan eegeynaa 10 ciyaaryahan oo qiimaha lagu iibsanayo xagaagan uu kor u dhaafi karo 100 milyan.
Xiddiga reer Belgium ayaa muddo dheer diirada u saarnaa Real Madrid, waxaana uu ku dhow yahay inuu heshiis 100 milyan euro ugu wareego kooxda Los Blancos ka dib finalka Europa League oo kooxdiisa haatan ee Chelsea ay la ciyaari doonto Arsenal 29ka bishaan May.
Gareth Bale wax u yaalo ma lahan Real Madrid. Xiddiga reer Wales ayaa haatan baadigoob u galaya halkii uu wajihi lahaa iyadoo Real Madrid ay dooneyso inay ugu yaraan soo ceshato lacagtii ay ka bixisay markii hore.
Xiddiga khadka dhexe ee Manchester United ayaa ku soo laabtay diirada Real Madrid. Pogba waxa si weyn u jecel tababare Zidane. United ayaana qiimo gaaraya 150 milyan euro duldhigtay xiddiga Faransiiska.
Xiddig kale oo khadka dhexe ah oo ay dooneyso Real Madrid waa xiddiga reer Denmark. Sida ay warbaahinta Spain sheegayaan Christain Eriksen ayaa heshiis hordhac ah la gaaray Real Madrid. Tottenham ma dooneyso inay iibiso xiddigaan xagaaga laakiin waxa ay diyaar u yihiin inay fasaxaan haddii 100 milyan miiska loo soo saaro.
Real Madrid kaliya ciyaartoy ma imaanayaan kuwana waa ay ka tagayaan, Isco ayaa ka tagi kara Real Madrid xagaagan. Ciyaaryahankii hore ee Malaga ayaa Yurub laga jecel yahay. Pirlo ayaa u soo jeediyay Juventus inay la wareegaan xiddiga halka PSG ay ku dooneyso dalab kor u dhaafaya 100 milyan.
Weeraryahanka Faransiiska ayaa la filayaa inuu xagaagan u wareego Barcelona iyadoo 1da July lacagta lagu burburinayo qandaraaskiisa ay noqon doonto 120 milyan euro halka ay haatan tahay 200 milyan euro.
Haddii Griezmann uu tago Barcelona, waxaa qasab noqoneysa in Philippe Coutinho la iibiyo. Xiddiga reer Brazil ayaa ku fashilmay Camp Nou laakiin waxaa doonaya kooxo ay ka mid yihiin Chelsea, PSG, Man United iyo Juventus. Chelsea ayaana diyaar la ah in ka badan 100 milyan si uu dib ugu laabto Premier League.
Xaalada Paulo Dybala ee Turin ayaa sii xumaaneysa. Xiriir fiican lama lahan Allegri looma arko xiddigaha kooxda tan iyo intii yimid Cristiano Ronaldo. Sida ay The Sun sheegtay United ayaa dooneysa Dybala iyagoo ku dalbanaya in ka badan 100 milyan euro.
Sancho iyo Joao Felix
Jadon Sancho iyo Joao Felix ayaa xaalad isku mid ah ku nool. Labada xiddig waxa ay ka mid yihiin xiddigaha mustaqbalka kubada cagta Yuurb waxaana ay u ciyaaraan kooxo heer dhexaad ah.
United ayaa dooneysa Jadon Sancho oo Ingariis ah laakiin Dortmund waxay ku rabtaa 115 milyan euro. Halka Sporting Lisbon ay Joao Felix ay duldhigeen 120 milyan euro.